Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay xildhibaannada ku biiray golaha wasiirada – Kalfadhi
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadajir ayaa si kulul uga hadlay xildhibaannada Soomaaliyeed ee xilalka looga magacaabo golaha wasiirada ee sii korortay.
Ra’iisul wasaare Khayre ayaa laba iyo toban xildhibaan u magacaabay wasiiro ku biiray golahiisa wasiirada.
‘’ 65% wasiirada xukuumadda waa xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka. ‘’ Marka laga hadlayo dimuqraadiyad,dowladdu waa in ay shacabku la xisaabtaman,’’ ayuu bartiisa Twitter ku soo qoray mudane Warsame.
Siyaasiga ayaa sido kale sheegay in ay habboon tahay kala madax banaanida hey’addaha fullinta iyo sharci dejinta si loo gaaro isla xisaabtan.
‘’ Haddii uusan jirin isla xisaabtan,dimuqraadiyad suutagal ma ahan.’’
Wasiir ku xigaannada golaha wasiirada 20 kamid ah waa xildhibaanno halka 10 xildhibaan loo magacaabay wasiiru dowlayaal.